Sii-hayaha Ra’isul wasaaraha oo kulan sagootin ah loo sameeyay – Radio Muqdisho
Sii-hayaha xilka Ra’isalwasaaraha Soomaaliya mudane C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta xafiiska waxaa uu kulan kula qaatay qeybaha kala duwan ee shaqaalaha xafiiska Ra’isulwasaaraha kaas oo ku saabsanaa sagootin Ra’isalwasaare C/weli loo sameynayay iyo mudada xilka uu hayay wada shaqeyntii dhex martay shaqaalaha xafiiska Ra’isalwasaaraha.
Mudada kulanka ay kas oo qeyb galeen dhamaan shaqaalaha xafiiska Ra’isalwasaaraha iyo sidoo kale la taliyaasha sii-hayaha Ra’isalwasaaraha ayaa mudada uu socday waxaa warbixino kala duwan laga dhageystay Agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee xafiiska Ra’isalwasaaraha.
Mudane C/weli Sheekh Axmed Maxamed sii hayaha xilka Ra’isalwasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in shaqaalaha xafiiskiisa ka howlgala ay dadaal wada bixiyeen isla markaana kaalin weyn ka qaateen horumarinta howlaha xafiiska uu shacabka Soomaaliyeed uu hayo.
Sidoo kale sii-hayaha xilka Ra’isalwasaaraha Soomaaliya ayaa kula dardaramay shaqaalaha xafiiska Ra’isalwasaaaraha in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan Ra’isalwasaaraha cusub ee imaan doona maadaama shaqada la qabanayo loo hayo dadka iyo dalka.
Ugu dambeyn mudane C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ka hadlay waajibka muwaadin walba oo Soomaali ah ka saran ka shaqeyn horumarka iyo midnimada dalkiisa iyo sida laga maarmaan ay u tahay in laga wada shaqeeyo gaarsiinta dalka halka uu hiigsanayo.
“Waxaa imaan doona Ra’isulwasaare cusub shaqada waa ay ku cusub, waxaana u malaynaya in uu yahay shakhsi aad wada taqaanaan, waa nin walaalkeena ah waa nin waaya arag ah waxaana rajaynayaa in shaqada uu wax badan ku soo kordhin doono” ayuu yir Mudane Cabduweli